Amaqhosha e-Butt Fusion abavelisi, abaxhasi - i-China Butt Fusion Machines Factory
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD500H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; Ulwakhiwo olulula, oluncinci kunye nedeli ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD1200H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD1000H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD800H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD630H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD450H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; Ulwakhiwo olulula, oluncinci kunye nedeli ...
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD400H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD250H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD315H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD355H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...